Mampivelatra ny "NP / KI-1 electro" sy ny "NP / KI-1 combi" combivant Klimov misy ranon-tsolika ao amin'ny fomba sikilika.
I. ny evaporateur "NP / KI-1 electro" ho an'ny vokatra ara-barotra maivana.
Fitoerana fametrahana ny fametrahana ny Kibmov NP / KI-1 Electro KV fanadiovana:
1. raw material 1,32 куб.м. 1 шт.
4. Cyclone capacitor 1 шт.
Ireo toetra mampiavaka ny fametrahana ny fametrahana ny mpandroba Kubov NP / KI-1 Electro KV:
1. Ny fanatanterahana ny fametrahana menaka solika, т/сутки – от 0,9 до 1,1.
2. Fitaovana elektronika efa napetraka, кВт. – до 24,0.
3. hery famatsiana, В – 380, dingana telo.
4. herinaratra, Гц – 50.
5. Weight vondrona (нетто), кг – до 1 150.
6. Weight vondrona (брутто), кг. – 1 150.
7. fametrahana halavan'ny, м – 2,2.
8. Machine sakany, м – 1,2.
9. Fito fananganana, м – 1,8.
10. Karazana fahombiazan'ny toetrandro – УХЛ 2.
11. Sokajy habaka – 1 по ГОСТ 15150.
Manompo fametrahana 1 isaky ny olona fiovana.
Ny fahombiazan'ny Electov NP / KI-1 Electro ho an'ny vokatra solika:
Miankina amin'ny volavolan-tsolika voajanahary, ny singa notakiny, ny fahaiza-manaon'ireo valan-javaboary NP / KI-1 elektro ho an'ny fanodinana fitaovam-piasana dia nahatratra 4.500 taonina isan'andro. Ny lanjam-pamokarana bebe kokoa (solika, kerosena, diesel) ao amin'ny menaka mitomandavana, ny avo kokoa ny fanatanterahana ny fametrahana.
Fanatontosana teknolojika ny fametrahana ny Klimov "NP / KI-1 electro":
Tsy misy "fanariana-priori" ao amin'ny evaporator "NP / KI-1 electro" Kubov noho ny famokarana vokatra avy amin'ny solika. Ny asan'ny fanamainana ety ambany dia tsy vita amin'ny fanambaniana, fa amin'ny fampivoarana ny asa. Izay no mahatonga ny fahafahana hahazo ny vokatra avy amin'ny vokatra avy amin'ny solika maivana izay tsy manify na manamaizina amin'ny fotoana. Ny haavon-tsarimihetsika farafahakeliny amin'ny fifehezana ao amin'ny kubovy evaporator dia 200 degre. Mifanohitra amin'ny fanamafisana ny kobay sy ny fitaovana fantsom-panafody, mba hahazoana solika solika, mila mamorona tebiteby ho an'ny solika 360 degrees. Ny fotodrafitrasa fanorenana ny evaporator cubes dia nalaina avy amin'ny natiora, sira ny ranomasina, izany hoe, maloto. Ary ny rahona eny amin'ny lanitra dia tena mazava sy mangatsiaka. Saingy tsy misy olona mahavaky ny ranomasina sy ny ranomasina.
Ny endriky ny tarika Electrol NP / KI-1:
Ny Klimov Kubov Evaporator NP / KI-1 Electro dia tena sarotra ary mandrakotra faritra iray metatra 2,6 metatra. Tsy manala ny gaza manala ny tontolo iainana. Tsy misy lasantsy mifandraika amin'izany, noho ny dingan'ny famokarana ambany, ny fiandohan'ny fizotrany amin'ny hafanana 50 degre. Ny tsara indrindra ho an'ny orinasa madinika dia manararaotra ny vola lany amin'ny solika sy ny solika. Ny vidiny ambany dia mahatonga ny valan-tsofoka ambany ho tetikasa haingana. Ny fahatsoran'ny famolavolana dia ahafahan'ny olona mamita ny asa. Ny fe-potoana fampiofanana dia 1 andro.
Injeniera mpanamboatra fitaovam-pitrandrahana alikaola ambany
Fanontaniana momba ny fametrahana ny valan-tsofin'ny Electro ambany Kibmov NP / KI-1 ho an'ny famokarana solika ara-barotra.
Fanontaniana ho an'ny mpamorona: Потребляемая электрическая мощность в 24 кВт постоянна при работе у кубового испарителя? Возможна ли круглосуточная работа?
22,5 кВт постоянное энергопотребление кубового испарителя, можно уменьшать нагрев - будет падать скорость перегонки. Есть еще два пониженных режима с потреблением 15,0 кВт и 7,5 кВт. Установка работает в круглосуточном режиме.
Fanontaniana ho an'ny mpamorona: Azo atao ve ny manamboatra fitaovana sy kitapom-batana ao amin'ny valan-javamaniry hanamboarana tohatra 3-5 metatra ary inona no atao hoe fanangonana ny fitaovana sy ny vokatra vokariny?
Ao amin'ny fametrahana "pumps NP / KI-1 electro" fametrahana tobin-tsolika napetraka mba hamonoana ny solika. Ny fanerena dia afaka mamorona 12 metatra amin'ny fivoahana. Eo am-pidirana dia ilaina ny haavon'ny rano dia ambonin'ny tampony. Ny pump dia tsy afaka manempotra rano. Noho izany, ny haavon'ny tahirin-tsolika fototra dia tokony ho avo kokoa noho ny valan-drivotra. Raha ny endriky ny fotodrafitrasa, ny pompetra eo amin'ny fametrahana dia eo ambanin'ny rafitra fiasa. Amin'ny famolavolana ny fametrahana, dia misy dipoavatra iray mba hamenoana ny tankan'ny fitaovana ara-teknolojika avy amin'ny solosaina ivelany izay afaka manangona amin'ny fitaovam-piasana.
Fanontaniana ho an'ny mpamorona: Good day! Te-hanazava aho fa tsy misy lamaody lehibe. Tranokely telo avy amin'ny faran'ny fitaovana, moa ve izy ireo lavaka na misy zavatra ao anatiny? Ny vokatra mandeha any amin'izay toetr'andro ary amin'ny toe-javatra inona? Aiza ny vokatra ao amin'ny fanjakana gasoy? Ahoana ny fisarahan'ny tsimok'aretina azo tsena ary azo atao ve ny mameno ireo tsangambato ireo amin'ny kilaometatra zeolita, mba hanatsarana bebe kokoa ny vokatra entin'ny dipoavatra ao amin'ny fanjakana mangatsiatsiaka?
Andry telo avy ny farany - dia heaters fitaovana, dia atao toy lehibe araka izay azo atao ho faran'izay betsaka ny hafanana faritra fifanakalozana eo amin'ny singa sy ny fanafanana tenoy akora, ka mitovy amin'ny endrika sy ny tsanganana. Tsy dia manana fifandraisana mivantana amin'ny fitaovam-pitsaboana izy ireo, ka manome antoka ny fiarovana ny fipoahana rehefa tsy mahomby na tsy mitandrina ny teniny. Izy io ihany koa dia manome fanovana haingana ny fampitaovana hafanana tsy nahavita nandroaka fitaovana avy amin'ny rafitra. Ny fitaovana elektronika dia ampiasaina amin'ny fanamafisana ireo fitaovana amidy. Ny fitaovam-pitaovana dia tsy nentina tany amin'ny sifotra, fa mangatsiaka mangatsiaka, mba hiteny. Ny fahapotehana dia mitranga ao amin'ny evaporator noho ny fanamafisana ny fitaovam-piasana mafana. A ifotony fitsipika samy hafa ny fiasan'ny ny stripper bottoms evaporator goba - tsy noho ny nahandro ampahany (ny dingana mangotraka ao amin'ny evaporator goba), fa noho ny hihena (dingana "voatery" ao amin'ny bottoms evaporator lasa etona). Ny vokatra vaporous lasa etona niforona ao amin'ny vondrona, dia nampidininy ny mari-pana sy ny zavona heaters zavona etona ho ranon-javatra amin'ny alalan'ny vortex rivo-doza. Ny fampiasana ny zeolite catalysts tsy mila mieritreritra, satria ny dingana mangotraka sy tsy misy zeolite catalysts no tena ampiasaina amin'ny famoretana catalytic, ary eto, koa, dia tsy misy. Miverimberina aho, mandritra ny fivalozana, dia mahazo ny zavatra madio tsy misy fatra izay nipoitra avy amin'ny solika, na ny fanavaozana amin'ny zavatra hafa. Lasa etona dingana for fractional fisarahana faobe ny molekiola, fa tsy amin'ny ny teboka mampangotraka azy, ka mitahiry izany ao am-boalohany endrika araka izay tao amin'ny fahana. Araka ny fandinihana octane vita lasantsy avy amin'ny solitany nitodika ambonin'ny lasa etona (Au 96), ary ny solika solika ambony cetane isa (60), satria tsy rovitra malemy intermolecular famatoran 'ny molekiola feedstock eo anatrehan' ny mandevy hery sy ny anjaran'ny tototry hydrocarbons aza unsaturated hydrocarbons .
Good day! Mazava ho azy fa midika izany fa diso izany. Amin'ity tranga ity, dia hita fa ny fandaniana amin'ny lozam-pifamoivoizana maivana dia tsy voafaritra amin'ny ampahany vola, satria Tsy misy siramamy, toy ity tranga ity, mba hamaritana ny fandaniana amin'ny fanaka avy amin'ny fako, ohatra ny 50% pyrolysis kodiarana ary 50% ny lozam-pifamoivoizana (fahazavana) misy ampahany amin'ny gazoline hatramin'ny 89%. Eny, mahaliana fa ny laharana octane tokana amin'ny ampahany betsaka amin'ny solika dia tsy hitranga raha toa ka mihamafy kokoa ny lanjan'ny petrolin'ny pyrolysis ary latsaka anaty diera? Misy teboka ve ny fandroana tsiranoka maromaro, mba hahazoana solika mahery vaika sy ultra madio sy solika?
Ny fatran'ny hazavana maivana dia voafaritra amin'ny ampahany vola, tsy diso ianao. Ara-pitsipi-pitondran-tena, ny habetsahan'ny molekiola, ny tebitebiny avo indrindra. Rehefa miasa ny evaporator cubic, dia ampiasaiko foana ny soatoavin'ny diplaoma manify voalohany. Ary araka ny eritreritrao, amin'ny fomba amam-pitsaboana amin'ny teboka marary, tsy misy voka-dratsiny samihafa? Na dia mandevina aza izy ireo. Noho izany, amin'ny fofom-bolo ianao dia mifidy faran'izay kely mifangaro, ny molekiolan'ny gazolinasa sy ny diplaoma mitovy amin'io. Tsy misy tsiambaratelo fa ny dipoavatra sy ny paraffin no mahavaky ny hafanana. Izany dia aretina goavana manadio, manadio solika avy amin'ny paraffins. Ary teo am-pototry ny evaporator, nizara ny fiakaran'ny 20% kerosene aho ary paraffins 80% ho an'ny faritra roa. Ny fivoahana manga ivelany ivelany dia toy ny gazy dipoavatra ary araka ny pasipaoro, araka ny endriky ny gazy dipoavatra rehetra, dia ny solontenan'ny fiara solosaina ihany no nanova ny fitaovan'ny solika indray mandeha tao anatin'ny 3 volana. Vokatr'izany, ny vokatra 20% ny kerosine sy ny sisa 80% ny voly tanimanga. Ity troka ity dia noho ny fisian'izy ireo teboka iray, fa ny molekule kerosene dia avo roa heny noho ny paraffine. Ho an'ny filazana: ny molekiolan'ny molekiolan'ny solika dia 110-230 ary ny molekiolan'ny molekiolan'ny parafine dia 300-450.
Dia tsy azoko, ny parafine dia mandeha amin'ny solika solika? Ary amin'ny vokatra avy amin'ny dipoavatra dipoavatra, azontsika ny kerosena sy ny dipoavatra mahery vaika? Inona no mitranga amin'ny mercaptans amin'io tranga io? Eny ary, raha ny marina, te-hahalala bebe kokoa momba ny ampahany solika aho, satria hafa koa ny molekiola amin'ireo ampahan-tsolika mivaingana..
Paraffin mandeha amin'ny solika solika? Amin'ny ankapobeny: eny, misy toerana ho azy. Te-hiteny aho fa tsy misy vahaolana tonga lafatra amin'ny famonoana azy ity na ity dingana ity. Ny vahaolana rehetra dia manana fahalemena sy hery. Manara-maso ny vahaolana amin'ny ordinatera mifanaraka amin'ny famokarana ambany aho.
Tsy manam-pahaizana manokana momba ny mercaptans aho, tsy manana mercaptan oils ao amin'ny faritra misy anay izahay. Saingy rehefa azoko izany dia mercaptans no tena fofona, ny fofona sulfide hydrogene. Raha ny mahazatra, dia nahatsikaritra fofona amoniana aho rehefa nizara solika mena. Saingy ny fofona hafa rehetra dia manondro fa ny fambolena voajanahary dia eo amin'ny fitaovam-pitsaboana, ny tsy fisian'izy ireo dia manimba ny vokatra azo avy amin'ny tsena amin'ny famokarany. Ny tokony hatao amin'ny tranga toy izany, dia afaka mampiasa ny solosaina odoranao ianao. Tsy mpahay simia matanjaka aho, mpanamboatra kokoa.
Fanontaniana ho an'ny mpamorona: Ilainay ny mametraka ny evaporateur kibatra ao anaty garan'ny biriky, ny haavon'ny mari-pifaneran'ny varavaram-baravarankely dia 1.80 m ho an'ny fiara ary sarotra ny manetsika ny fametrahana ao anatin'ny garazy.
Fanampiny amin'ny famolavolana ny modely vaovao. Ny endrik'ireo modely fanindronan'ny vatam-panafody dia hosoloina amin'ny kodiarana polyurethane lava be mavesatra, ary hitombo ny halavan'ny fametrahana, dia hitovy amin'ny 1750 mm. Heveriko fa na dia ambany ambany aza ny varavaram-baravaran'ny garage. Ny modelim-pitaovana iray hafa "2" dia hapetraka miaraka amina paompy fantson-tena ho an'ny tenany manokana, ny 9x metatra. Ary miaraka amin'ny fantsom-panafody mitondra fitaovam-piadiana ahafahana mametraka ny vokatra vita.
Fanontaniana ho an'ny mpamorona: Azo atao ve ny manodina menaka solifara amin'ny vaporizer amin'ny famolavolana anao?
Nampiasaina ny solika solika. Mipoitra eo amin'ny fivoahana izany: 7% ny rano, 7% ny gazy dipoavatra avo lenta (tsy misy paraffine ao anaty menaka, satria ny fanadiovana ny paraffin ao amin'ny famokarana, noho izany, ny lanjan'ny fambolena), 70-80% ny solika madio, ny fanampiana solika dia voatahiry tsara, ny sisa dia nigrol ho an'ny fatana. Raha ampidirina amin'ny 30% ho an'ny orinasa ny solika miverina indray, dia tsy misy fahasamihafana hamaritana ny atao hoe fandinihana ary tsy misy fiantraikany amin'ny motera. Amin'ny ankapobeny, ny vokatra avy amin'ny solika avo lenta ary-20A. Ny isam-pamokarana amin'ny solika dia 20 isan-jato ambany noho ny voaisa iray ary ny 50 hatramin'ny 300 degre ny fandaharam-potoana. ambony. Tsy azo atao ny mamorona hafanana toy izany eo amin'ireo fitaovana fanasan-damba, ankoatr'izany ny famokarana afo ho an'ny fanasitranana ny zavatra ilaina..
Fanontaniana ho an'ny mpamorona: Raha ny fahadiovam-pitondrantena, azoko fa tsy mila manadio ny vokatra ianao aorian'ny fanamafisana ny vatanao. Ary avy eo dia nieritreritra aho fa madio kokoa preobratat.
Raha ny fiasa tsy ara-dalana dia tsy voatsabo amin'ny fiolikolika, matetika dia miteraka ranom-boankazo sy pyrolysis misy liquids. Amin'izao fotoana izao, ny vokatra vita dia hanomboka mivadika mavo na maizina. Noho ny tsy fahampian-tsakafo karakaraina nandritra ny vanim-potoan'ny fitehirizana ny vokatra ara-barotra maivana, dia miha-mifamihina ny isan'ny molekiola. Noho izany, ny fifandraisana mifandraika amin'ny habetsaky ny molekilan'ny solika sy ny lokon'ny vokatra solika dia miteraka, ny lehibe kokoa ny molekiola, ny maizina ny rano..
Tsy mieritreritra aho ary manolo-tena hanadiovana ho madio. Mitondra sivan-tsarimihetsika mety hoentina avy amin'ny kamiao iray izay manadio hatramin'ny mikro iray mikarantsana, miaraka amina tsindry mavesatra na mangeja, mandehano solika amin'ny alalan'ny alohan'ny fampiasana, ary arotsaho ao anaty valizy. Any, raha misy zavatra miforona ao anaty solika, dia hihazona ny zava-drehetra. Ity dia fomba tena mora sy tsara indrindra amin'ny fanadiovana ny vokatra avy amin'ny solika.